tvN – Networks – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Birthcare Center (2020) Complete Unicode အိုဟွန်းဂျင်က ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာအသက်အငယ်ဆုံးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရာမှာထက်မြက်ကျွမ်းကျင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါ သူကရုတ်တရက်မ​မျှော်လင့်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရလာတယ် အဲ့နောက်သူက အလုပ်ကိစ္စမှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပေမယ့် ကလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသူ မလုပ်နိုင်တာကိုသိခဲ့တယ် အဲ့တာကြောင့်မွေးပြီးဆေးရုံကဆင်းဆင်းချင်းကလေးနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်စောင့်ရှောင့်ရေးစင်တာကိုသွားခဲ့ပါတယ် အဲ့နောက်အဲ့စင်တာမှာဘာတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲ တခြားကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေနဲ့ရော ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာဟာသနှောကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားလေးကို Mon,Tue မှာ TVN ကပြသမှာဖြစ်ပါတယ် Credit Review Zawgyi အိုဟြန္းဂ်င္က ကုမၸဏီဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြၾကားမွာအသက္အငယ္ဆုံးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရာမွာထက္ျမက္ကြၽမ္းက်င္တဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ပါ သူက႐ုတ္တရက္မ​ေမွ်ာ္လင့္ပဲ ကိုယ္ဝန္ရလာတယ္ အဲ့ေနာက္သူက အလုပ္ကိစၥမွာကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေပမယ့္ ကေလးကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးသူ မလုပ္ႏိုင္တာကိုသိခဲ့တယ္ အဲ့တာေၾကာင့္ေမြးၿပီးေဆး႐ုံကဆင္းဆင္းခ်င္းကေလးႏွင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေစာင့္ေရွာင့္ေရးစင္တာကိုသြားခဲ့ပါတယ္ အဲ့ေနာက္အဲ့စင္တာမွာဘာေတြဘယ္လိုဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ တျခားကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ၾကမလဲ ဆိုတာဟာသေႏွာၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီဇာတ္ကားေလးကို Mon,Tue မွာ TVN ကျပသမွာျဖစ္ပါတယ္ Credit Review Quality - Web-dl 1080p Episode 1 YuuDrive , SharePw , Server M-File Episode2YuuDrive , SharePw , Server M-File Episode3YuuDrive , SharePw , Server M-File Episode4YuuDrive , SharePw , Server M-File Episode5YuuDrive , ...
What’s Wrong with Secretary Kim (2018) Complete Unicode မင်းသား Park Seo Joon နဲ့ မင်းသမီး Park Min Young တို့ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက Jung Kyun Yoon ရဲ့ နာမည်ကြီး webtoon တစ်ခုကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားရော မင်းသမီးရော ဇာတ်လမ်းနဲ့တွဲဖက်ညီလှပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ Park Seo Joon က ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ လီယောင်ဂျွန်းအဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး Park Min Young ကတော့သူရဲ့ Secretary ဂင်မီဆိုအဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်..။ ဒုဥက္ကဌလီယောင်ဂျွန်းက လုပ်ငန်းပိုင်းမှာအောင်ကျော်ကြားယုံတင်မဟုတ်ဘဲ Personal ပိုင်းအရလဲ သန့်လွန်းလို့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ပေမယ့် မိန်းမဆိုရင် လုပ်ငန်းသဘောကလွဲလို့ အကပ်မခံသူမို့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က သူတို့သားလေး အပုန်းဖြစ်နေမှာကို စိုးရိမ်နေရရှာတဲ့ ကိုယ်တော်ချောပါ။ အလုပ်ကိုလဲ နင်းကန်ဖိလုပ်တတ်သူဖြစ်သလို သေချာတိကျပြီး သူများမှားရင်လဲ အလိုလို အလာ့ဂျစ်ထလာတတ်တဲ့ ဇီဇာကြောင် လူထူးချွန်ပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ တော်ယုံမကိုးစားတတ်တဲ့ကိုယ်တော်ချောရဲ့ ဘေးမှာ အတွင်းရေးမှူးရာထူးယူထားရတဲ့ ဂင်မီဆိုရဲ့ ဘဝကတော့ ...
TMDb: 8.5/10 44 votes
The K2 (2016) Complete Unicode တိုင်းပြည်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံထားရပြီး မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့သက်တော်စောင့်တစ်ယောက်ရယ်၊ လက်တုန့်ပြန်ဖို့ဆိုရင် အချစ်ကိုလက်နက်တစ်ခုလို အသံုံးချတတ်တဲ့ သမ္မတလောင်းတစ်ဦးရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းသမီး နဲ့ ကြင်နာတတ်ပြီးဖော်ရွှေတတ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးနောက်ကွယ်မှ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ သမ္မတကတော်လောင်းတစ်ဦးတို့ကြားမှာရှိတဲ့ ရှုပ်ထွေးသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ K2 လို့ခေါ်တဲ့ ကင်ဂျယ်ဟာ (ဂျီချန်ဝု) ဟာ လူထုကြားရေပန်းစားနေတဲ့သမ္မတလောင်းရဲ့ ဇနီး ကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ့် ကိုယ်ရံတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မတလောင်းဂျန်၏ တိတ်တိတ်ပုန်းသမီးဂိုအန်နာ (ယွန်နာ) ဟာ သီးခြားနေထိုင်ပေမယ့်လည်းယောက်ျားလေးများ၏ အသည်းကိုခွဲသူအဖြစ် နာမည်ထွက်လာတဲ့အခါသူ့ကိုအပြတ်ရှင်းဖို့ K2 ကို တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ချိန်မှာမှ သူတို့နှစ်ဦးကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Credit Review ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Nyi Nyi ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi တိုင္းျပည္နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕ စြန႔္ပစ္ျခင္းကိုခံထားရၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္တဲ့သက္ေတာ္ေစာင့္တစ္ေယာက္ရယ္၊ လက္တုန႔္ျပန္ဖို႔ဆိုရင္ အခ်စ္ကိုလက္နက္တစ္ခုလို အသံုံးခ်တတ္တဲ့ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးရဲ႕ တိတ္တိတ္ပုန္းသမီး နဲ႔ ၾကင္နာတတ္ၿပီးေဖာ္ေ႐ႊတတ္တဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးေနာက္ကြယ္မွ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားတဲ့ သမၼတကေတာ္ေလာင္းတစ္ဦးတို႔ၾကားမွာရွိတဲ့ ရႈပ္ေထြးေသာဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ K2 လို႔ေခၚတဲ့ ကင္ဂ်ယ္ဟာ (ဂ်ီခ်န္ဝု) ဟာ ...
Flower of Evil (2020) Complete Unicode ဘဲ့ဟီဆန်းဆိုတဲ့သူဟာ မိသားစုကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အပြင် ရှေ့ရေးမပူပန်ဘဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ဖို့ အမြဲအလုပ်ကြိုစားတဲ့သူတစ်ယောက်… ဒါ့ကြောင့်သူ့အလုပ်ရုံလေးကလည်းအတော်အသင့်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်… ဇနီးဖြစ်သူ စုံထောက် ချာဂျီဝန်းအတွက် ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးပေါ့… အဲ့ဒီနောက်တော့ ချာဂျီဝန်းအမြဲခေါင်းကိုက်ရတော့မယ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတယ်… အဲ့ဒါက စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ယောက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်အမှုတွေကြောင့်ပါပဲ… ဒီအမှုကိုဖော်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကစလို့ မထင်မှတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်.. သဲထိတ်ရင်ဖို မှုခင်းဇာတ်လမ်းကောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်..မင်းသားလည်းချောရမယ်..မင်းသမီးလည်း လှနေရမယ်ဆိုတာမျိုးမှကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လက်လွှတ်မခံသင့်ပါကြောင်း…. ကိုင်းဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး… Credit Review Zawgyi ဘဲ့ဟီဆန္းဆိုတဲ့သူဟာ မိသားစုကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့အျပင္ ေရွ႕ေရးမပူပန္ဘဲ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနႏိုင္ဖို႔ အၿမဲအလုပ္ႀကိဳစားတဲ့သူတစ္ေယာက္… ဒါ့ေၾကာင့္သူ႔အလုပ္႐ုံေလးကလည္းအေတာ္အသင့္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရတယ္… ဇနီးျဖစ္သူ စုံေထာက္ ခ်ာဂ်ီဝန္းအတြက္ ေက်နပ္စရာေကာင္းတဲ့မိသားစုေလးေပါ့… အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ခ်ာဂ်ီဝန္းအၿမဲေခါင္းကိုက္ရေတာ့မယ္ကိစၥတစ္ခုေပၚလာတယ္… အဲ့ဒါက စိတၱဇလူသတ္သမားတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ထိတ္လန႔္ဖြယ္အမႈေတြေၾကာင့္ပါပဲ… ဒီအမႈကိုေဖာ္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ မထင္မွတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြဆက္တိုက္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္.. သဲထိတ္ရင္ဖို မႈခင္းဇာတ္လမ္းေကာင္းလည္းျဖစ္ရမယ္..မင္းသားလည္းေခ်ာရမယ္..မင္းသမီးလည္း လွေနရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးမွႀကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္လက္လႊတ္မခံသင့္ပါေၾကာင္း…. ကိုင္းဘာေတြျဖစ္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ ခံစားၾကည့္ၾကပါဉီး… Credit Review Quality - Web-dl 1080p Episode 1 YuuDrive , SharePw , Storage M-Sub , Direct Download Episode2YuuDrive , SharePw , Direct Download Episode3YuuDrive , SharePw , Direct Download Episode4YuuDrive , SharePw , Direct ...
Psychopath Diary (2019) Complete Unicode အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ Thriller , Mystery , Comdey အမျူ ိးအစားကားလေးပါ အဓိကဇာတ်ဆောင်များအနေနဲ့ကတော့ Hip the Top,Your Honor,Grand Prince,Nokdu Flowerကားထဲကမင်းသားချော Yoon Shi Yoon Waikiki 1,Terius Behind Me,Naked Fireman,Circle ထဲက မင်းသမီးချောလေး Jung In Sun အပြင် My Only One,Justice တို့ထဲက မင်းသား Park Sung Hoon တို့ကအဓိပါဝင်ထားကြပါတယ် >>>> ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း <<<< စုံထောက်ကား သရဲကား လူသတ်ကားတွေကို အလွန်သဘောကျတဲ့ လူရိုးလေး ယုဒုံရှစ် သူတပါးကို ကူညီတတ်ပြီး အားနာတတ်လွန်းတဲ့သူ ပြသနာဖြစ်ရင် ဘယ်သူမှားမှား တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပဲတတွတ်တွတ်ပြောလေ့ရှိပြီး သည်းခံတတ်တဲ့သူသူကရိုးအလွန်းတော့ သူ့ကိုနိုင့်ထက်စီးနင်းတွေလုပ်ချင်လာကြတယ်တနေ့ရုံးမှာ လာဘ်စားတဲ့ပြသနာဖြစ်တော့သူ့သူငယ်ချင်းရေးတဲ့ အစီရင်ခံစာကိုသွားတင်ပေးမိတဲ့သူ့အပေါ်ပုံကြလာတော့တယ်သူတစ်ပါးကိုအမြဲလိုနားလည်ပေးတတ်တဲ့သူ့ကိုနောက်ကွယ်မှာ ဘာပြောပြောယုံတဲ့ ငတုံးဆိုပြီးသူ့စေတနာတွေကို စော်ကားဖျက်စီးကြလေတော့မျှော်လင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူဟာ ဆောက်လက်စ အဆောက်အအုံတစ်ခုပေါ်ကခုန်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အမှတ်မထင် ကြားလိုက်ရတဲ့ ကယ်ပါအုန်းဆိုတဲ့ ...
The Bride of the Water God (2017) Complete So Ah ဆိုတဲ့ဆရာဝန္မေလး ကေကာင္းကင္ဘံုကေနလူ႔ျပည္ကိုဆင္းသက္လာတဲ့ Ha Baek ဆိုတဲ့ေရနတ္ဘုရားေလးကို ေပးဆပ္ (ယဇ္ပူေဇာ္) ခံရၿပီး HaBaek ရဲ႕ အလုပ္အေကၽြးျပဴရသူ (ကၽြန္) ျဖစ္လာရင္း သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားက အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ေဖၚၾကဴးျပသသြားမွာပါတဲ့ ☺ Joo Hyuk ရဲ႕ ဇာတ္႐ုပ္ Ha Baek- "သူဟာ ေသြးေအးတယ္၊ စတိုင္က်တယ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွဳအျပည့္ရွိတဲ့ပံုစံမ်ိဳး" Shin Se Kyung ရဲ႕ဇာတ္႐ုပ္ - "So Ah ဟာ ေဆးရံုတရံုရဲ႕ အာရံုေၾကာနွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဌာနရဲ႕ အႀကီးအကဲတေယာက္ျဖစ္ျပီး ကိုယ္တိုင္လည္း trauma ရထားတဲ့သူတေယာက္.. နတ္ဘုရားျဖစ္တဲ့ Ha Baek နဲ႔ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္တဲ့လူသားမိန္းကေလးအျဖစ္သရုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ Lim Ju Hwan ကေတာ့ Hoo Ye ဆိုတဲ့ ၾကင္နာတတ္ျပီး ရိုးသားတဲ့သူတေယာက္ျဖစ္ျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္မွဳေတြနဲ႔ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ တေယာက္ Ha Baek ရဲ႕အဓိကၿပိဳင္ဘက္တစ္ေယာက္ေပါ့ ...